Geosmina: kedu ihe ọ bụ, njirimara ya na mmekọrịta ya na mmiri ozuzo | Netwọk Mgbasa Ozi
Nature na-enye anyi otutu ihe di egwu ma di uto dika ndi mmiri ozuzo. O doro anya na ọ bụ isi ísì na-ewetara gị agụụ agụụ na mmetụta nke ịgabiga oge na-amasị gị. Mgbe ogologo oge ụkọ mmiri ozuzo, mgbe mmiri nke mbụ mmiri na-ezo, ị nwere ike ịnụ ísì ụtọ nke na-eziga ikuku niile ma mee ka anyị mata na oge udu mmiri na-eru nso. Ka osi di, onu ogugu mmadu amaghi ihe igwe n’eme ka ikuku na-esi n’isi a. Nkọwa maka nke a bụ n’ogige a na-akpọ geosmin nke bụ maka isi a maara aha petricor.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara geosmin, njirimara ya na ihe kpatara ya ji esi isi ísì mmiri.
1 Ihe bụ
2 Mgbasa na omume nke geosmin
3 Ojiji nke nje geosmin
Mgbe anyị na-ekwu maka petricor anyị na-ezo aka na isi njirimara nke mmiri ozuzo na-amalite mgbe ọ dara, ọkachasị mgbe ogologo oge ọkọchị. Ihe na-esi ísì ụtọ nke na-eme ka ikuku niile na-egbu egbu sitere na onyinye a na-akpọ geosmin. Geosmin bụ ihe na-ahụ maka izochi ọtụtụ nde nje mgbe mmiri zoro n’ala.
Isi ọrụ nke ọgbọ nke geosmin bụ nje Streptomyces nke coelicolor. Ejiri aha nje Albert mara ya. Tinyere cyanobacteria ndị ọzọ na ụfọdụ fungi bi na ala bụ ndị a na-arụ ọrụ mgbe mmiri ozuzo na-ede ala. Geosmin abụghị naanị na irighiri ihe ndị na-ese n'elu mmiri mgbe mmiri ozuzo rutere. Ọ bụkwa ihe na-enye njirimara isi nke beets. Anyị maara na beets nwere isi ụwa nke na-apụ apụ ozugbo emerepere ha.
Ebe ọzọ anyị hụrụ geosmin bụ n’ọkụ nke ụfọdụ mmanya.
Mgbasa na omume nke geosmin
Anyị ga-ahụ ihe bụ isi usoro ọrụ ihe geosmin nwere yana etu ha si agbasa ikuku. Na nke mbụ, ndị ọkà mmụta sayensị lekwasịrị anya n’ikike ịkọwapụta usoro geosmin si enwe ike ịgbasa n’ikuku. Iji kọwaa nke a, otu ìgwè ndị na-eme nchọpụta ejirila igwefoto na-agba ọsọ na ink dee ihe. Ha ejirila nke a nwee ike ịse ihe n'ụzọ zuru ezu ihe na-eme mgbe mmiri mmiri na-emetụta ala nke juputara na nje ndị ahụ ekwuru n'elu.
Mgbe emechara ndekọ ahụ, a chọpụtara na, mgbe mmiri mmiri na-ada, na-ejide obere ikuku ikuku ma na-akụri ya n'ala. Ozugbo mmiri mmiri ahụ kwụsịrị, mmiri nile nke mmiri ahụ na-arịgo n’elu ma gbawaa, na-emepụta obere ụgbọelu na-awụba mmiri n’ikuku. Enwere ike ịsị na otu ihe ahụ na - eme mgbe a na - ewepụta gas site na ihe ọ drinkụ carbonụ carbonated dị ka champeenu ma ọ bụ biya. Ndị a na-egosipụta site na buut iji gbawaa n'ime ikuku mgbe ọ ruru n'elu.
Ozugbo ọ gbawara, a na-ahapụ obere aerosol site na ala nke na-ahụ maka ịchụsasị mmanụ na-esi ísì ụtọ. Nke ọ bụla n’ime ihe ndị ahụ bụ maka ibufe ọtụtụ puku nje ndị nwere ike ịnwụ ruo otu awa n’ikuku. N'ihi ya, petricor anaghị adịkarị ogologo oge karịa oge a. Nje bacteria ndị a bụ maka isi nke ụwa ọhụrụ anyị na-ahụ mgbe mmiri na-ezo.
Ojiji nke nje geosmin
Enwere otutu ihe omumu nke metutara nje a na ojiji ndi ozo. Ma geosmin na nje bacteria na-ezo n'oge mmiri ozuzo na-adịghị emerụ mmadụ ahụ. Na mgbakwunye, amara na ha na-eji iji nweta ndepụta ogologo ọgwụ n'etiti ha bụ ndị na-egbochi nje antibacterial dị ka tetracycline, erythromycin, rifampin, ma ọ bụ kanamycin, na ọgwụ ndị na-egbochi nje ndị dị ka nystatin.
A na-enweta ojiji ọzọ nke ọmụmụ geosmin mgbe ị matachara ntọala molecule na biosynthesis nke geosmin. Mara otú onyinye a si arụ ọrụ, ndị ahụ na-akwado mmanya dị mma nwere ike ịbara uru yana ọkachasị ndị nwere mmetụta karịa inye. Ọnụnọ nke geosmin nwere ike ịbụ ezigbo nro maka ndị na-emepụta mmanya, n'ihi na ọnụnọ nke aromas ndị a nwere ike imebi njirimara nke ngwaahịa ahụ. N'ihi ihe omuma nke biosynthesis nke ogige a, enwere ike inye ufodu uzo esi belata ma obu wepu onu ya na ufodu mmanya iji meziwanye ogo ha.
Ọ bụ ezie na ọ nwere ike iyi ka ọ nweghị mmekọ Okpo ọnụ nke ndị na-a winụ mmanya na akpịrị ịkpọ nkụ nke kamel, nwere njikọ zuru ezu. Ihe dị mkpa nke ihe a na usoro ihe ọmụmụ metụtara ndụ nke kamel n'ọzara. Ọ bụ geosmin, molekul nke na-egosi kamel na mmiri dị nso. Ma ọ bụ na ụfọdụ kamel nke ọzara Gobi nwere ike ịchọta mmiri karịa kilomita 80. Eziokwu ahụ bụ na kamel pụrụ isi na mmiri chọta ebe dị anya bụ ihe ndị sayensị kọwara kemgbe ọtụtụ afọ.
Site na nchoputa nke geosmin na njirimara ya, o nwere ike buru uzo nke anumanu iji gbasaa ahihia nke microorganisms a ka ha nwee ike imata ebe mmiri di.
O yiri ka n'ọzara, Streptomyces ọ na - ewepụta geosmin na mmiri, nke ndị na - anabata ihe na - esi ísì ụtọ na kamel nwere ike ịnara. A na-eche na thesì ụtọ nke geosmin nwere ike ịbụ usoro maka ụmụ anụmanụ iji gbasaa ahihia nke ụmụ nje ndị a. Yabụ, mgbe kamel drinkụrụ mmiri, ha na-agbasa ọfụma ebe ọ bụla ha na-aga, na-enyere mgbasa ha aka. Mana ogige a dị ka obere ihe, geosmin, nwere ike ịbụ okwu gbasara ndụ na ọnwụ nke kamel. Ọ bụrụ na mkpụrụ ndụ ihe nketa mgbanwe mere na okike ọ ga-abụ egwu maka ụmụ anụmanụ ndị a. Na mgbakwunye, ọ bụghị naanị na kamel nwere mmasị na isi nke geosmin, mana ụfọdụ ikpuru na ụmụ ahụhụ nwekwara ike ịchụpụ nsogbu nke nje ndị a.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere geosmin na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Geosmin
Fata Morgana utịp